गणतन्त्र दिवस : राजतन्त्रकै ‘कमसल फोटोकपी’जस्तो बन्‍यो गणतन्त्र ! « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
गणतन्त्र दिवस : राजतन्त्रकै ‘कमसल फोटोकपी’जस्तो बन्‍यो गणतन्त्र !
आज जेठ १५ अर्थात् गणतन्त्र दिवस । संविधान सभाको पहिलो बैठकले १३ वर्षअघि मुलुकलाई संघीय गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा घोषण गरेको दिन । आजको दिन देशभर विभिन्‍न कार्यक्रहरु गरेको मनाइने गरिन्छ । तर, यो वर्ष भने कोरोना महामारीका कारण जारी निषेधाज्ञाले गणतन्त्र दिवस सम्झनामा मात्र सीमित रहने देखिन्छ । अर्को तर्फ सत्ता संघर्षको चापले गणतन्त्रको मर्म स्वयं धरापमा परेको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
२०६५ साल जेठ १५ गतेको उक्त निर्णयसँगै गणतन्त्रको प्रतीकको रूपमा राष्ट्रपतिलाई राखियो । नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रसमेत बन्यो । मुलुकमा संघीयता लागु भयो । अधिकार विकेन्द्रीकरणले देश आर्थिक समृद्धीतर्फ जान्छ भन्‍ने आश्‍वासन जनतालाई बाँडियो ।
तर, जुन उद्देश्यका साथ गणतन्त्रको सपना देखाइएको थियो, त्यो अनुसारको काम र उपलब्धि प्राप्त नभएको अधिवक्ता सुनिल पोखरेल बताउँछन् । गणतन्त्रको विषयमा अनलाइनपनासँगको कुराकानीमा उनले भने, “जुन उद्देश्य र सपनाका साथ गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो । त्यो अनुसार उपलब्धी भएको छैन । गणतन्त्रका रक्षकद्वारा काम कम र सास्ती ज्यादा मिलेको छ । गणतन्त्रको प्रतीक मानिने राष्ट्रपतिबाट नै संविधान विपरीत कार्य भइरहेको हामी देख्‍न सक्छौ ।”
उनले गणतन्त्रको उपलब्धीलाई गलत दिशाबाट प्रयोग भइरहेको आशय प्रदान गरेका छन् । गणतन्त्र प्राप्ति आफैँमा एउटा ठूलो उपलब्धि भए पनि जनताले यसको अनुभूति गर्न नपाएको वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् । उनले गणतन्त्र राजतन्त्रकै ‘फोटोकपी’ मात्र भएको जिकिर गरेका छन् ।
स्थापना भएको १३ वर्षको लामो समयमा गणतन्त्र अझै संस्थागत हुन नसकेको र गणतन्त्र झन-झन कमजोर हुँदै गइरहनुको मुख्य जिम्मेवार हाम्रा राष्ट्र प्रमुखहरूको प्रस्तुति रहेको उनको ठम्याइ छ । यसै विषयमा अनलाइनपनासँग भएको कुराकानीमा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, “राजतन्त्र जसरी खर्चिलो थियो गणतन्त्र पनि उस्तै देखिएको छ । जसरी राजाको सवारी हुँदा जनतालाई बाटो छेकिन्थ्यो, आज जनताकै छोराछोरी राष्ट्र प्रमुख हुँदा समेत अवस्था उस्तै छ । हामीलाई गणतन्त्रको अनुभूति भएकै छैन । यो त राजतन्त्रकै फोटोकपी जस्तो छ । अझ कमसल गुणस्तरको फोटोकपी ।”
उनले दैनिक रूपमा सक्रिय राजनीति गरिरहेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन नहुने पाठ हालको राजनीतिक अवस्थाले सिकाएको बताएका छन् । सक्रिय राजनीतिज्ञलाई राष्ट्रप्रमुख बनाउँदा ऊ जनताको प्रमुख नभएर गुटको समर्थक बन्‍ने अवस्था सिर्जना हुनु विडम्बनाको रूपमा रहेको जिकिर गरेका छन् ।
उनले भने, “राष्ट्रप्रमुखको कार्यालय गुटको झगडा मिलाउने ठाउँ बनेको छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई कुन स्वार्थले भेट्ने ? राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रिय हितका लागि भन्दा पनि गुटको स्वार्थका लागि प्रयोग हुँदा गणतन्त्र झन् धरापमा परेको छ । खतरामा परेको छ ।”
उनले १३ वर्षको अवधिमा पनि जनताले सुखद् गणतन्त्रको अनुभूति गर्न नपाउँदा, गणतन्त्र नामको मात्र गणतन्त्र रहेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै गणतन्त्रको स्थापनाले मुलुकमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका उपलब्धि हासील भएको अधिवक्ता संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी बताउँछन् । गणतन्त्र दिवस राजनीतिक रूपमा एक महत्पूर्ण दिवसको रूपमा हेर्न सकिने उनी भनाइ छ । उनले भने, “गणतन्त्र स्थापना विवादग्रस्त नभएको भने होइन । गणतन्त्र प्रजातान्त्रिक प्रणालीका रूपमा स्थापित हुन्छ भने त्यसको औचित्य पूरा हुन्छ । हामीले गणतन्त्रको सदुपयोग कसरी गरिरहेका छौँ, त्यसमा भर पर्छ ।”
गणतन्त्रको उपलब्धीको रूपमा नयाँ नेपाल र नयाँ संविधानलाई हेर्न सकिने पोखरेलको भनाइ छ । संघीयताको प्रयोग हुनु, देशमा लगानीको वातावरण सिर्जना हुनु, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक सशक्तीकरणका प्रयास हुनुलाई अधिकारीले गणतन्त्रको सकारात्मक पक्षमा रहेको बताएका छन् ।
त्यस्तै राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त हुनु र सत्तारुढ दलको विवादले गर्दा आन्तरिक संघर्ष उत्पन्‍न हुँदा जनतामा निराशा छाएको उनी बताउँछन् । उनले थपे, “गणतन्त्रद्वारा स्थापित संविधान विपरीत पटक-पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु, दुई तीहाइको सरकार अल्पमतमा पुग्‍नु जस्ता कुराले गणतन्त्रको नकारात्मक पक्ष झल्काएको छ ।”
प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०७८, शनिबार ८ : ४९ बजे